» नेप्सेमा ऐतिहासिक रेकर्ड
२ बैशाख २०७८, बिहीबार १७:१८
काठमाडौं । २०७८ को पहिलो कारोबार बिहीबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले ऐतिहासिक नयाँ रेकर्ड राखेको छ । नेप्से परिसूचक २० दशमलव ६७ अंकले बढेर २ हजार ७ सय ३५ दशमलव ४६ अंकमा पुगेको छ। जुन, हालसम्मकै उच्च हो ।
नेप्से परिसूचकसँगै सेयर बजार पुँजीकरण समेतले नयाँ रेकर्ड राखेको छ । बिहीबारसम्मको पुँजीकरण ३७ खर्ब ८७ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ । नेप्से परिसूचकसँगै बिहीबार ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ६ दशमलव १७ अंकले बढेर ४ सय ९२ दशमलव ४४ अंकमा पुगेको छ । कारोबार रकम पनि ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै भएको छ ।
समूहगत सवइन्डेक्सहरुमा जलविद्युत र व्यापार समूह घटेका छन् । बाँकी सबै समूहहरुको सबइन्डेक्स बढेको छ ।
तालिकामा हेर्नुस् कुन कम्पनीले धेरै कमाए ? कुनले गुमाए ?
यस्तो छ आज विदेशी मुद्रा सटहीदर
तोलामा ९०० ले घट्यो सुनको मुल्य
निषेधाज्ञाको पहिलो दिन लगानीकर्ता उत्साहित करिब २६ अंकले बढ्यो नेप्से
साताको अन्तिम दिन घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कति छ तोलामा ?